Doorashooyinka Maraykanka Iyo Qaabka Loo Doorto Madaxweynaha!W/Q:Eng Xuseen Deyr. | WAJAALE NEWS
Doorashooyinka Maraykanka Iyo Qaabka Loo Doorto Madaxweynaha!W/Q:Eng Xuseen Deyr.
1;Yaa Doorta M/weynaha Maraykanka? Qaabkeese Loo Doortaa?
2;Sidee Gobollada loogu qaybiyaa tirada “DOORTAYAASHA” “ELECTORS” M/weynaha Maraykanka?
B)Tirada Dadweynaha ku nool gobolkaa iyo
3;Qaabkee ayaa loo soo xulaa ama loo magacaabaa “DOORTAYAASHA” “ELECTORS” M/weynaha Maraykanka?
A;Doorashada ka hor, isla sanadkaa ay Doorashadu dhacayso, ayaa Xisbiyadu waxay Shir Weynahooda (Party Convention) ku doortaan DOORTAYAASHA Madaxweynaha ee Xisbigooda;
B;Qaabka labaad ee ay Xisbiyadu u doortaan “DOORTAYAASHA-ELECTORS” Madaxweynaha waxa u codeeya oo doorta Golaha Dhexe ee Xisbiga.
4;Sidee ayaa Musharaxiinta loogu qaybiyaa Tirada Codadka ee Gobollada Dalka?
5;Waa Maxay sababta ay Maraykanku u doorteen nidaamka “GOLAHA DOORTAYAASHA ama ELECTORAL COLLEGE”?
�In ay Madaxweynaha doortaan Kongeresku; sababtoo ah waxay halis ku tahay kala xadaynta Awoodaha Dawladnimada;
�In ay guusha Madaxweynuhu ku salaysnaato codka tooska ah ee Dadweynaha(popular vote); sababta oo ah waxay keeni kartaa in Gobollada waaweyn ee dadkoodu badan yihiin ay si toos ah u dooran doonaan Murashaxa Gobolkooda, sidaana ay ku muquunin doonaa Gobollada yar yar.
6;Haddaba waa maxay faa’iidada nidaamka “Golaha Doortayaasha ama Electoral College”?
Qoraa iyo Siyaasi Madaxbanaan;